सावधान ! बाँकेमा कोराना संक्रमण बढ्दै, ‘आफ्नो ज्यान आफै जोगाउनुस्’ – Satyapati
सावधान ! बाँकेमा कोराना संक्रमण बढ्दै, ‘आफ्नो ज्यान आफै जोगाउनुस्’
बाँके । बाँकेमा कोराना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । निको हुने र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । यो बढिरहेको संक्रमण दर तत्काल घट्ने देखिँदैन । जटिल समस्या भएका संक्रमित बढेपछि अस्पतालमा शैय्या र चिकित्सकको अभाव भएको छ । त्यसैले सबैले कोरानाबाट बच्न सावधानी अपनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । पत्रकार निशु जोशीको रिपोर्ट :
विरामी बुवा अस्पतालमा उपचार गराइरहेको फोटोहरु राख्दै सुरेन्द्र चलाउनेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आज भेरी अस्पतालमा छैठौैं दिनको वसाइसँगै बुवाको स्वास्थ्यमा सुधार आउँदै गरेकोमा खुशी छौं ।’ यस्तै केहिले कोराना संक्रमणबाट आफन्तको मृत्यु भएका, स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएका, उपचारमा भोगेका दुख, केहिले घरमै बसेर गर्न सकिने उपचार लगायतका विषयमा लेखेका छन् ।
यस्ता स्टाटसमा कमेन्टको ओइरो लाग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य सुधारको कामना गर्दै आएका कमेन्टहरुले संक्रमितहरुमा केहि आशा र हौसला थप्ने गरेको बरिष्ठ साहित्यकार सनत रेग्मीको भनाई छ । कोराना पोजेटिभ भएर आइसोलेसनमा बसेका उनको सुझाव छ, ‘कोरानाबाट वच्न साना साना कुरामा ध्यान दिनुस् ।’ सामाजिक सञ्जाल हाल कोरानाको संक्रमणका विभिन्न विषयले भरिएका छन् ।
ज्वरो आए, खानाको स्वाद हराएका लगायतका लक्षण देखिनसाथ अस्पतालमा जानुपर्ने चिकित्सकहरुले लेखेका छन् । हरेक विरामीमा फरक लक्षण देखिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका औषधि प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरुको सुझाव छ । रुघाखोकी लागेमा, ज्वरो आएमा तत्काल उपचारमा आउन भेरी अस्पताल नेपालगन्जका फिजिसियन डा.खगेन्द्रजंग शाहको सुझाव रहेको छ ।
दोश्रो चरणको कोराना संक्रमणदर देशमै सबैभन्दा बढि बाँकेमा देखिएको छ । पहिलो चरणमा चार महिनामा देखिने संक्रमीतको संख्या बाँकेमा एक हप्तामै देखिएकोले सबै नागरिकले सावधानी अपनाउँदै सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको भेरी अस्पताल नेपालगन्जका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा.प्रकाशबहादुर थापा बताउँछन् । हाल जिल्लामा दैनिक १०० देखि २०० जनासम्म दैनिकरुपमा निको भएर घर फर्किरहेका छन् ।
तर १०० देखि ६०० को संख्यामा संक्रमित थपिने गरेका छन् । त्यसमाथि संक्रमितमा जटिल खालका समस्या देखिएका छन् । अस्पतालमै राखेर चिकित्सकको निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । संक्रमितको संख्या अत्याधिक भएपछि अस्पतालहरुमा उपचार गर्न समस्या भएको छ । हाल जिल्लामा भेरी अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा कोराना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालहरुमा चिकित्सकको अभाव सधै हुने गरेको थियो । हाल प्रदेश र संघिय सरकारबाट ५० लाख वजेट र ८५ जना स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालले पाउने भएको छ । यसका लागि दरबन्दी खुला गरिसकिएको छ । तर हालको अवस्थामा भेरी अस्पतालका ८३ जना स्वास्थ्यकर्मीमा समेत कोराना संक्रमण देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि चिकित्सकहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै विरामीको उपचारमा खटिरहेका छन् ।
कोराना संक्रमणको दर घटाउन यहाँका चिकित्सकहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यस्तै भूमिका खेल्दैछन् यहाँका जनप्रतिनिधि पनि । बाँकेका आठ वटै पालिकामा पहिलो चरणमा निर्माण गरिएका आइशोलेसन वार्ड सञ्चालनमा आउने क्रममा छन् । कतिपय पालिकाले अक्सिजनसहितका वार्ड सञ्चालनमा ल्याउँदैछन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रामलिला मैदानस्थित तालिम केन्द्रमा ५० वार्डको आइशोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
उपमहानगरपालिकामा १२४ जनामा कोराना संक्रमण देखिएको छ । यस क्षेत्रका अगुवाहरुमा संक्रमण फैलिँदै गएकाले अवस्था जटिल बन्दै गएको उपमेयर उमा थापा मगरको भनाई छ । थापाका अनुसार यति बेडले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । बाँकेमा निको भएर घर फर्किने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो छ । तर दैनिक १०० बढिमा कोराना संक्रमण देखिएकाले तत्काल यो संक्रमणदर घट्ने अवस्था देखिँदैन ।
सरकारले ५०० बढि सक्रिय संक्रमित भएमा निषेधाज्ञा गर्न सकिने जनाएको छ । संक्रमीतको संख्या घट्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा हरेक नागरीकले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो भयावह अवस्थामा पनि कोराना नियन्त्रणका लागी यहाँका प्रमुख राजनीतिक दल, प्रदेश र संघीय सरकारले भूमीका खेल्न नसकेको बाँकेबासीको गुनासो छ ।